မိုးစက်ပွင့်: ချစ်သော ဒီဇင်ဘာ နှင့် ရောက်တတ်ရာရာများ
Posted by Me at 17:31
တောင်ပေါ်မှာနှင်းမုိုးတွေကျရင်ရှေ့ ကိုသိပ်မမြင်ရဘူး။ အရမ်းလည်းလေတုိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့တောင်တက်ခရီးကတော့ချောပါတယ်။ လုံးဝမခက်ဘူး။ လမ်းလေးတွေလည်းကောင်းတယ်။ (နတ်မတောင်ဥယျာဉ်ကဧည့်ရာသီဆိုလမ်းလေးတွေပြန်ထွင်ပေးထားတတ်တယ်။
တောင်ပေါ်မှာစခန်းချအိပ်မှာဆုိုရင်တော့ စလီးပင်းဘက်ဒ်နွေးတာယူသွားနော့်။ ကိုယ်သွားတုန်းကတောင်ထိပ်မှာအိပ်ခဲ့တာချမ်းသလားတော့မမေးနဲ့ ။အနွေးထည်ကနွေးလို့ တော်တော့တယ်။ ဒီအချိန်ဆိုတောင်ဇလပ်တွေလည်းပွင့်ရောပေ့ါ။
အပြန်ကျပို့ စ်လေးတင်အုန်းနော်။ အပြေးလာဖတ်မယ်။း)
Moe Sett Pwint 27 December 2012 at 10:26
Dear Iora ( MMR font is problematic now :-))
Thanks so much for your kind advice and info, my dear.
Yes I will bring warmest clothes, leather, etc..
I can't wait to see beautiful " taung-za-latt" flowers ...
Again,thanks for your new year wish :-)
with love, moe sett
စူးနှယျလေး 27 December 2012 at 13:31
တို့လည်း ခုတလော ဗမာပြည်တာင်တက်ခရီးတွေ သွားကြည့်ချင်နေတာ..မိုးစက်က ဦးသွားပြီ :D
အခုက ခြေလျှင်တောင်တက်အသင်းနဲ့တက်မှာလား... ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကော တက်လို့ရသလား...
ပြန်လာရင် အင်ဖော်မေးရှင်းလေးတွေ ရေးပေးဦးနော်